कुलमान नियुक्तविरूद्धको मुद्दा कसको इजलासमा पुग्यो ? — Sanchar Kendra
कुलमान नियुक्तविरूद्धको मुद्दा कसको इजलासमा पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ । उक्त पदमा आफू रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्र शाक्यले सोमबार रिट दिएका थिए।
उक्त रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेको छ। उनको रिट उक्त इजलासको १० दशौं नम्बरमा परेको छ। आफू पदमा रहँदा रहँदै कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति कानूनविपरीत भएको भन्दै शाक्य अदालत गएका थिए।